Akụkọ kacha ọhụrụ banyere FCC si Nigeria & ụwa | TAA
E jidere Senator Melaye na ọdụ ụgbọ elu Abuja
Òtù ndị na-aṅụ ọgwụ ọjọọ na-eti nwa nwanyị anya na Calabar
2019: Prọfesọ Soyinka, Femi Falana ndị ọzọ na-akpọ maka nche
Ekiti guber: Dayo Adeyeye gbara ndi ikpe PDP, choro ndi nzuko nzuko
IMF na-ekwupụta nchegbu banyere ikike Nigeria nwere maka ịkwado ego mgbazinye ego
RB Leipzig, onye nyocha Celtic na Arsenal na-echekwa nkwekọrịta Arthur Okonkwo
Jose Mourinho: Manchester City siri ike inweta
FCTA dọrọ ndị obodo aka ná ntị ka ha ghara ịzụta ala n'alakagbe mpaghara
Minista FCT, Muhammad Bello akwaala ihe omume na-akwadoghị nke ndị isi ma gwa ndị mmadụ ka ha kwụsị ọrụ na atụmatụ nke ala ndị Council Council nyere aka ruo mgbe a ga-emechi usoro nchịkwa aha.
Ex-President Obasanjo na-achọ itinye uche nke ndị nche nchebe na North
Onye isi oche President Olusegun Obasanjo na Thursday mere ka President Muhammadu Buhari mebie isi ochichi nke nchekwa mba ahụ n'otu mpaghara geopolitical kama itinye aka na ụkpụrụ nke gọọmenti etiti.
21 US na-agba mbọ ka ọ ghara ịnọpụ iche
Otu ìgwè nke ndị na-ahụ maka iwu obodo nke 21 United States gbara akwụkwọ ka ha gbaa akaebe na Federal Communications Commission kpebisiri ike ịkwụsị nnọpụiche na Tuesday mgbe Democrats kwuru na ọ dị mkpa ka otu otu votu na Senate kagbuo FCC.
FCC na-agọnahụ ụlọnga ụlọ ọrụ
Onye isi oche a, Federal Character Commission (FCC), Dr Shettima Abba, akpọwo maka mmekọrịta dị n'etiti ọrụ ahụ, ndị gọvanọ, ndị isi obodo na ndị ọzọ.
FCC na-achọ ka gị na Nzukọ Mba
NPA na-agọnahụ akụkọ banyere mmega ahụ na nzuzo
Òtù Na-ahụ Maka Ụgbọ Mmiri nke Nigeria (NPA) gọnahụ akụkọ nke ụlọ ọrụ na-aga n'ihu.
Ala ọ bụla dị na Naijiria ka a na - emebido - ọrụ njirimara gọọmentị
Shettima Bukar-Abba, onye isi oche nke Commission Federal Character Commission (FCC), kwuru na ọrụ ahụ na-arụsi ọrụ ike iji hụ na ọ dị mma na nhọpụta ahụ n'ime ụlọ ọrụ gọọmenti etiti.
Ihe nke Federal enyerela aka n'igidesi ike nke Naijiria - AGF Abubakar Malami
Attorney General of the Federation (AGF), Mr Abubakar Malami, agwala ndị na-akwado ndị uweojii na-achị obodo ka ha mee ka ọ ghara ịdaba na egwu nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ọrụ ndị uweojii, ọganihu aka na mkparị.
Ndị uweojii na-ahụ maka ndị uwe ojii kwesịrị ịtụle arụmụka - AGF Abubakar Malami
Attorney General nke Federation, AGF, Abubakar Malami, agwala ndị na-akwado ndị uweojii na-anọchite anya ndị uweojii na-edozi ya maka egwu nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ọrụ ndị uweojii, mgbasawanye ogwe aka na mkparị.
Ndị na-akwado mgbasa ozi na-eme atụmatụ atụmatụ US iji kwụsị nkwụsị aka
Ọtụtụ ndị na-ahụ maka ịntanetị nke Ịntanetị apụtawo megide US Federal Communications Commission (FCC) onyeisi oche Ajit Pai na-eme atụmatụ ịkwụsị nnọpụiche.
Agotu na marginalization'll ga-efu dika Ebola - FCC
Akwụkwọ akụkọ Federal Character Commission (FCC) kwuru na site na ndị na-ahụ maka oche na desktọọpụ na-arụ ọrụ na Ngalaba, Ụlọ Ọrụ na Ngalaba (MDAs), mbipụta nke ụbụrụ a na-ekwu ga-apụ n'anya dịka nje Ebola a na-atụ ụjọ.
Mkpokọta ndị isi gọọmentị nwere ike imebi
Ihe mgbochi ukwu abụghị ihe mgbasa ozi dịka ọtụtụ ndị na-eme nnyocha na-echekarị. Ọ bụ eziokwu na mgbasa ozi nwere ike ime ka mwepụ nke mba karịa ka ha mere n'oge a, ma ọ gaghị echefu na ozi nkewa esiteghị n'aka ha.
Balloons inye Puerto Rico ọrụ ekwentị
Alphabet Inc, ụlọ ọrụ nke na-achịkwa Google, na-eziga balloons pụrụ iche na Puerto Rico iji nyere aka weghachite ozi ekwentị mgbe Oké Ifufe Maria dara na àgwàetiti a n'ọnwa gara aga.
Ejikwa ọ bụghị nanị ebo ka a na-emewanye ka ọ dị na ọkwa gọọmenti etiti - onyeisi FCC Bukar Abba
Onye isi ochichi-onyeisi oche nke Federal Character Commission (FCC), Dr. Shettima Bukar Abba, ekwuola na ọ bụghị naanị na ọ bụ òtù a ka a na-eme ka ndị na-arụ ọrụ gọọmenti na-achịkwa.
Mee ka ndị Naijiria na-eme ihe gị - Minista na-agwa FCC
Onye Minista nke Ozi na Culture, Lai Mohammed, na Friday nyere aka na Federal Character Commission (FCC) iji kụziere ndị Nigeria ihe omume ya.
Buhari enweghi ike ichikota ya - ndi isi
Ndị isi oche ụnyaahụ kwuru taa na President Muhammadu Buhari enweghị ike iji wuo mba ahụ site n'aka ndị agha.
Onye isi oche APC nke na-anọchite anya Kogi West Dino Melaye na-ekwu na e jidere ya ugbu a n'ọdụ ụgbọelu mba dị na Abuja.
Otu onye na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe, bụ nke a kpọrọ Chinenye, egbuola ndị òtù ya maka ịrara nra, izu ụka, na Calabar, isi obodo Cross River.
Nobel Laureate, Prof. Wole Soyinka, na Sunday gwara ndị Niger ka ha kpachara anya banyere ndị ha bu n'obi ịtụkwasị ntuli aka ha na nhoputa ndi ochichi 2019.
Ego Monetary International (IMF) egosiputa nchegbu banyere ike Naijiria iji jee ozi mgbazinye ego ya na ihe karịrị $ 18.9billion, nyere ya ọnọdụ akụ na ụba na ngwaahịa na ego ala.
Onye na-agbaso nzuko nke Peoples Democratic Party n'ihu nke votu ochichi nke July 14 Ekiti, Dayo Adeyeye, rịọrọ kọmitii David Mark, nke na-achọ nkwụsị nke ndị omeiwu na mpaghara mpaghara mpaghara mpaghara nke steeti.
Roy Hodgson na-agba Wilfried Zaha ume igosi ike n'agbanyeghị na ezubere ya
Onye nchịkwa Crystal Palace Roy Hodgson gwara Wilfried Zaha ka ọ nọgide na-agba ọsọ na mgbachitere, n'agbanyeghị agbanyeghị ọgwụgwọ ọ ga-edozi.
N'ụlọ mkpọrọ Lula da Silva ka a na-achọ ka ọ bụrụ ọkacha mmasị na Brazil
Onye isi Brazil Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, onye nọ n'ụlọ mkpọrọ kemgbe izu gara aga, ka na-eduzi nhọrọ nhoputa ndi ochichi tupu onu ogugu onwa October, dika nhoputa ohuru ohuru.
Ndi oru mgbasaozi Naijiria nyochaa ndi agha ugbo
A na-ejikarị foto nke nwoke na-eji égbè agha eme ihe n'ihu ọha iji kọwaa akụkọ mgbasa ozi nke Naijiria banyere nsogbu ndị ọbara na-agba n'etiti ndị ọrụ ugbo na ndị na-azụ anụ.
Osun Assembly gafere Bill N179.2 Bill appropriation Bill
Akụkụ ahụ sochiri otu mkpesa nke onyeisi ụlọ, Mr Timothy Owoeye, kwadoro ya ka ọ bụrụ onye Kinda Oyedele, Onye Isi oche nke Ụlọ Isi na Ego na Kwadoro na ụtụtụ na ụnyaahụ na Osogbo.
Ndị na-atụ anya na anụ ụlọ na-egbu ndị obodo 32 na Nasarawa
Ndị agha a na-enyo enyo na ha bụ ndị Fulani azụ anụ ụlọ egbuola ndị mmadụ 32 Tiv n'obodo dịgasị iche iche na mpaghara nchịkwa Senator nke dị na Nasarawa State n'ọtụtụ nchịkọta nke ọma.